IMac Cusub Oo Lagu Soo Bandhigay WWDC 2017 | Wararka IPhone
Waa WWDC, laakiin sidoo kale meel ayaa loogu talagalay qalabka - iMac cusub!
Luis del Barco | | Alaabada Apple
Shirka horumarinta Apple wuxuu inta badan diiradda saarayaa softiweerka iyo codsiyada kala duwan ee mustaqbalka ee waxa lagu soo bandhigo ay yeelan karaan. Si kastaba ha noqotee, iyo ka dib nus saac badhkeed oo dhacdo ah, oo ku soo bandhigaya warka xawaaraha Formula 1, casriyeynta ugu horreysa ee galabtii ayaa timid, markan kombuyuutarrada kumbuyuutarka ee shirkadda.
Dayactirka, si kastaba ha noqotee, kuma imaan qaybta qurxinta. Qurxinta mashiinadan waxay ahaan doontaa sidii aan ogayn ilaa iyo hada, laakiin gudaha waxay ka awood badnaan doonaan sidii hore si ay u bixiyaan tayada laga filayo alaabada dhamaadka sare.
IMac-ka cusubi waa 43% ka iftiin badan yahay jiilkii hore wuxuuna soo bandhigayaa processor-yada cusub ee Kaby Lake oo ka socda Intel, sidaad filan lahayd. Intaa waxaa sii dheer, nooca inji-ka weyn wuxuu gaari karaa ilaa 64GB oo RAM ah si kuwa ugu baahi badan aysan wax dhib ah ugu qabin shaqooyinka u baahan ka baaraandeg badan.
Xagga qiimaha, waxay ka bilaaban doonaan $ 1.099 oo ah nooca 21,5-inji ah iyo 1.299 oo ah nooca isku dhejiska ah iyo shaashadda xallinta 4K. Nooca 27-inji ah, qiimaha bilowgu wuxuu ka bilaaban doonaa $ 1,799. Laakiin intaas uun baa tahay?
In kasta oo ay sidaa u muuqatay, haddana ma aha dhammaan wararka xagga qiimaha ee aan aragnay oo lagu soo bandhigay masraxa. MacBooks ma helaan oo kaliya awood badan, laakiin sidoo kale waxay cusbooneysiiyaan qiimahooda. $ 1,299 oo loogu talagalay MacBook, $ 1,299 loogu talagalay 13-inch MacBook Pro oo aan lahayn Bar Bar, $ 1,799 isla moodelkan oo leh Touch Bar, iyo $ 2,399 oo loogu talagalay 15-inch MacBook Pro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Waa WWDC, laakiin sidoo kale meel ayaa loogu talagalay qalabka - iMac cusub!
macOS High Sierra: nidaamka cusub ee loogu talagalay Macs
watchOS 4 waxay noo keeneysaa sheeko cusub oo Toy ah WatchFaces